Camaloow Online - News: Meles Zenawi ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisu dib u gelayaan soomaaliya Home
21 May 2013 17:18:03 Random Media
· Guests Online: 561
Arbaciinu Nawawi - casharka 1aad - Sh. Cumar Faaruuq
Meles Zenawi ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisu dib u gelayaan soomaaliya Raisul wasaaraha itoobiya Meles Zenawi ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisu dib u gelayaan soomaaliya hadii Qatar lageliyo Joogitaanka Ciidamada Africa ee kusugan Gudaha soomaaliya gaar ahaan qeeybo ka mid ah Caasimada Muqdisho.
Zenawi oo shir jaraaid ku qabtay Caasimada Itoobiya ee Adis ababa ayaa carabka ku adkeeyey in ciidamadiisu aaneey u geleeyn Soomaaliya Hiilin eey u hiilinayaan dowlada KM G ee uu hogaamiyo Shiikh shariif xitaa ayuu yiri hadii eey qarka u saran tahay in eey dhacdo ama la rido.
�Ma dhaafeeyno xuduuda ilaa ineey jirto Qatar soo waajaheysa nolosha ciidamada Nabad ilaalinta Africa ee AMISOM hadii eey naga dalbadaan inaan usoo gurmano ciidamadaasi si dhaqsa ayaan u geleynaa soomaaliya anagoon ka laba labeeyn� ayuu yiri Meleska Itoobiya.
Zenawi ayaa ku sheegay soo gelitaanka Soomaaliya eey dib usoo gelayaan ciidamadiisu hadiiba eey dhacdo mar labaad ineey tahay oo kaliya ineey Caawinayaan sidii Ciidamada AMISOM eey uga bixi lahaayeen Soomaaliya kuwaasi oo hada gudaha Muqdisho eey ka joogaan 6000 Askari oo ka socda wadamada Uganda iyo Burundi.
�Waxaan u geli doonaa dhulka soomaaliya si gudaha hoose ah oo fog ilaa gunta ayaan tegi doonaa si aan u caawino bixitaanka ciidamada AMISOM arintaasina waxaan u aragnaa muhiim aad ah laakiin ma filaayo ineey dhici doonto� ayuu hadalkiisa kusii daray Zenawi.
Ciidamada itoobiya ayaa Soomaaliya galay sanadkii 2006 dii si eey xukunka uga tuuraan Maamulkii Maxkamadaha islaamiga isla markaana u caawiyaan dowladii KMG aheeyd ee C/laahi yuusuf uu hogaaminayey waxeeyna wadanka isaga carareen kadib markii Xoogaga Soomaalidu eey dagaal xooga uga saareen Wadanka dhamaadkii 2009 kadib laba sano oo dagaal joogta ah.
Ciidamada Itoobiya oo iyagu ah Ciidan ujeeda gaara wata isla markaana labada dal uu ka dhexeeyo cadaawad dhul iyo diin intaba ku saleeysan ayaan marnaba laga soo dhoweeyneeyn dalka iyagoo la kulmaya Dagaalo iyo ka hor imaad xoogan oo ku saleeysan diin iyo wadaniyad intaba.
Wadamada IGAD iyo kuwa Midowga Africa ayaa sharciyeeyey in ciidamo dheeraad ah loo diro soomaaliya Qaraxyadii Kampala kadib welina ma jiraan wadamo si rasmi ah ugu dhawaaqay ineey ciidan xoog leh u dirayaan Soomaaliya. Camaloow onlin Xafiiska wararka Moqadisho
0 Comments · 28391 Reads
10,167,224 unique visits